Dib U Eegid : 6- Arin Ayaa U Sabab Ahaa Guul Daradii Musiibada Aheyd Ee Barcelona | Kooxda
Dib U Eegid : 6- Arin Ayaa U Sabab Ahaa Guul Daradii Musiibada Aheyd Ee Barcelona
Published on April 17, 2014 by admin · 2 Comments
Kooxda Barcelona ayaa guul darro musiibo ah kala kulantay kooxda Real Madrid oo uga badisay 2/1 waxaana u sabab ah musiibadaan heer ciyaareed liita oo Barca ku soo galeen kulankaan , waxa ayna sii wateen heer ciyaareedka niyad jabka ah ee todobaadyadii ugu dambeeyay .
Waxa ayna kooxda.com warbixintaan ku xuseysaa sababaha keenay guul daradaas xooggan ee Barcelona qabsatay
1- Masaafada Qadka Dhexe : Barcelona waxa ay ku fashilmeen in ay buuxiyaan qadka dhexe waxa ayna fursad siiyeen xiddigaha Jarmalka iyadoo weerar waliba oo rogaal celis ah oo ay qaadeen Real waxa ay halis gilinayeen shabaqa United iyadoo xittaa goolka Gareth Bale uu ku yimid masaafada banaan ee qadka dhexe waxa uuna ahaa gool aan mar-marsiyo laheyn .
2- Xiilad Yari Xavi Iyo Iniesta Ah : baasaska Xavi iyo Iniesta kulankaan waa laga fiicnaa , 80% baasaskooda waxa ay siinayeen Dani Alves oo u sii baasayay Jordi Alba kaasi oo u sii baasayay Fabregas , baasaskooda kuwo loo jeedo ayay ahaayeen waana midda keentay in ay halis gilin waayeen goosha Iker .
3- Messi : Messi ayaa ku jira soo gudbinta heer ciyaareed laga niyad jabo , Barcelona 10-laacib ayay ku ciyaareen waayo helis uu Messi sameeyay ma jirin .
4-Neymar : Neymar ayaa sii wada heerka qasaarinta fursadaha ee mantiqada goosha kooxda ka soo horjeedda oo waa hubaal guusha gacantiisa ayay ku jiri laheyd haddii uu si sax ah uga faa`ideysan lahaa baaskii Xavi .
Neymar inkastoo uu dadaadalayay hadana waxa uu u baahan yahay hor mar badan si baasaska ugu turjumo goolal
5- Gaabin Ku Aadan Maamuladda Kubadda : Barcelona waxaa kulankaan ka maqanaa sameynta kubad deg deg ah oo waqti badan ayuu ku qaadanayay in kubadda jiidaan waana mid daafacyada Real siineysay in ay dib u cararaan oo ay difaac galaan .
Fabregas waa uu gar guuranayay oo kubadda in uu jeedo ayaa ku adkeyd oo uu ka qaado qadka dhexe una jiido weerarka waana midda keentay in qeybtii labaad la badalo .
6-Tata Martino : Tata Martino ayaa kulankaan ku soo galay shax laga fiican yahay marka loo eego Ancelotti iyadoo macalinkaan reer Argentina uusan sameyn badel taatiko leh waana midda shaqada u sahashay Ancelotti ka dib laba guul darro oo ay horay ugala soo kulmeen kooxda Barcelona .
abuukar says:	April 17, 2014 at 9:26 am	asc webka kooxda waa idin salaamy marka xiga sxb ma xuma in aad ka hadashaan ciyaarti xalay wixii ka dhacay sxbyaal waxaad mooda in qald uu jiro ma qoraal ahaan mise aqoon daro waayo ninka u ciyaaro realmadrid ee jarmal u dhashay mida kale ma real ayaa la ciyaartay united mise barca!? waad fiicantihin lakin hadaad rabto hormar wax fiican ama xaqiiqda aa laga hadlaa qaldka noocaan ma ahn wax macquul ah
Reply »	mustafe abdi says:	April 18, 2014 at 8:54 pm	asc firstiga ma run mise ben xalayto barca waa laga fcna tatikadeedo ma ficnayn
Copyright © 2012 kooxda.com> All Rights Reserved. Designed by : Eawhost Ltd